Ku badbaadi $ 1000 on Sole Fitness F80 Treadmill - Lacag Dib u Furi
Home » Amazon » Ku kaydi $ 1000 on Sole Fitness F80 Treadmill
Ku kaydi $ 1000 on Sole Fitness F80 Treadmill
Dib-u-bixinnada farsamada ah waxaa laga helaa Saleebar Shirkadda F80 Treadmill Amazon
Ku kaydi $ 1000 on Sole Fitness F80 Treadmill - Qiimaha Rukunka Asalka ah $ 2499.99
On Sale Hadda for kaliya 1499.99 !!
The SOLE F80 treadmill waxay bixisaa damaanad-soosaarka warshadaha iyo Cushion Flex Whisper Deck. Meelaha barkimahaan waxaa lagu muujiyay in ay yareeyaan saameynta kudahaaga adoo ilaa xuduudda% 40 marka la barbar dhigo in lagu ordo asphalt. Sole F80 treadmill waxay leedahay awood xoog leh, 3.5 shaqeyn joogto ah HP kaas oo bixiya xawaare adag oo u dhigma 12 MPH waxayna u dhigantaa 15%.
Si fudud loogu daro iyo marka treadmill uusan isticmaalin, marinka treadmill qallooc iyo laabto meel. The Sole F80 wuxuu leeyahay lix barnaamij oo horudhac ah, laba barnaamij oo loo diyaar garoobayo, iyo labo barnaamij oo wadnaha lagu barto.
Muuqaal sawir leh oo firfircoon waxaa ka mid ah guddi fariin ah oo loogu talagalay waxbarid cad iyo jawaab celin. Macluumaadka la soo bandhigo mar walba oo dhan waxaa ka mid ah Xawaaraha, Tilmaamaha, Waqtiga, Socodka Safarka, Kalooriyeyaasha, Nabarka iyo Nabadgelyada. Waxaa sidoo kale jira xayeysiin ah 1 / 4 mile iyo Peak iyo Valley Valley for barnaamijyada kala duwan. Qalabka treadmill-ka ah ayaa lagu dhisay wadahadal kaas oo kuu ogolaanaya inaad ku xirto mid ka mid ah MP3 ciyaaryahan si aad u dhageysatid liiska cayaaraha aad jeceshahay muddada aad shaqeyneysid.
Lakabka Dufanka: Naqshaduhu waxay ka kooban yihiin nidaamyo dhan oo loo yaqaan patie iyo nidaamka isdabajooga ee leh Qalabka Nabadgelyada Badbaadada (Lock Lock) kaas oo gashadaa meel qoyaan leh marka treadmill ay ku taal meel qumman. F80 waxa kale oo ay la timaadaa Easy Assisted Folding Design Design, kaas oo kuu ogolaanaya inaad sii deyso meel hoose, dib u noqoshada, iyo qoorta ayaa si toos ah u furtaa inta aad daawaneysid.
Xakamaynta Maareynta: Miisaaniyadda korjoogteynta ah ayaa waxay leedahay muuqaal deg-deg ah iyo is-bedelaad wax-is-barbardhigyo dhinacyada LCD-ga ee ku-habboonaanta hagaajinta shaqada.
Cushion Flex Whisper Deck: Tiknoolajiyada sirta ah ee macaamiishu waxay bixisaa shaqo raaxo leh oo deggan, iyadoo yareyneysa saameynta ilaa 40%.
Qalabaynta Welded Dhaqdhaqaaq adag oo adag, waa mid xoogan oo ku habboon isticmaalka isticmaalka soo noqnoqda ee isticmaalayaasha miisaanka iyo dhererka oo dhan.
SOLE LCD Sawirka: Muraayad buluug leh oo leh nambarro waaweyn oo nadiif ah ayaa siiya dadka isticmaala macluumaad wax ku ool ah, oo ay ku jiraan xaddiga garaaca wadnaha, xawaaraha, xajmiga, kaloorada gubatay, iyo waxyaabo kale oo faa'iido leh oo macluumaad ah.
Guddiga Isdhexgalka Boostada: Xaruunta qoraalka alfasayiga ah waxay farriin u dirtaa dadka isticmaala si ay u hagto dhammaan faahfaahinta tababarka kasta. Guddiga fariinta ayaa sidoo kale dib u soo celin doona jimicsigaaga oo dhan kadib markaad dhameysid, si aad u aragto horumarkaaga.
Gawaadhida Tareenka Sare oo leh Flywheels: Dhamaan miisaaniyada SOLE waxay ka muuqdaan mashiinka culus ee culus iyo mishiinnada fasalkooda. Nidaamyada waxaa ka mid ah budada loo yaqaan 'powder-coated, all-steel-welded frames' iyo farsamooyinka adag ee adag, makiinadaha tayada warshadaha ee leh dhexroor ballaaran, zinc dhammaantiis ayaa ku duuban duullimaadyada isku-dheellitiran ee loogu talagalay dabbaal-deg deg ah oo soconaya.
Duubaha: 2.75-ganjeerada waxay leeyihiin qaab nadiif ah oo la xiray iyo fiilooyinka dhulka hoostiisa ee rinjiga si loo yareeyo duruufaha. Rugaha waaweyn waxay sameeyaan dusha sare ee xiriirka ee ka soo horjeedka suunka iyo rooga dheer iyo suunka suunka.
Qaanadaha: Boorsooyinka labo-laabo leh afar lakab, oo ay ka mid yihiin laba lakab oo caag ah oo ka samaysan lakabka PVC ee leh nayl shidaal ah oo qoryo saaraya godka iyo godadka. Kombiyuutarku wuxuu bixiyaa duruufaha, PVC-ka wuxuu joojiyaa suunka ka soo jiidashada badan, iyo naylon wuxuu bixiyaa dusha sare oo aan caadi ahayn oo dusha sare leh.
Cabbirta 35 by 58 by xNUMX inji (W x H x D)
Qiyaasaha qadarka 35 by 80 inji (W x D)
Qaadashada qiyaasaha dusha sare 22 by xNUMX inches (W x D)
Xaddiga miisaanka 375-pound
Xakamaynta & Noocyada
3.5 CHP, DC Gawaarida nooca
0.5-ilaa-12 MPH xawaaraha
0-to-15% naqshadeeynta qalabka rack-iyo-pinion
Suunka laba-laabta ah
Xakamaynta nabarka iyo xabadka ayaa lagu xakameynayaa xaddiga garaaca wadnaha
Lix barnaamij oo caadi ah
Laba barnaamij oo khaas ah
Laba barnaamij oo wadnaha ah
Nidaamka codka MP3-ku habboon
Muujinta shaashadda 7.5-inch LCD
fasaxyada Qeybtan qalabka SOLE waxaa ka mid ah shuruudaha soo-saaraha soo-saaraha ee ka soo horjeeda cilladaha qalabka iyo shaqada:
Naqshadda, mootada, iyo garabka: Nolosha
Shirkado: Shan sano
Shaqada: Laba sano
Riix Halkan si aad u iibsato Sole Fitness F80 Treadmill Folding laga bilaabo Amazon
* Qiimaha $ 1499.99 ee Sole F80 waa mid ka mid ah 8 / 29 / 13 4: 21 PM PM. Sicirka qiimaha iyo helitaanka waa sax marka loo eego taariikhda / wakhtiga la tilmaamay iyo in la bedelo. Qiimaha iyo helitaanka macluumaad kasta oo lagu soo bandhigay Amazon.com xilliga iibsigu waxay khuseysaa iibsashada alaabtan
August 29, 2013 Jimicsiga Amazon, qorraxdu, Treadmills 1 Comment	$ 1000 off Sole Treadmill, Sale Sole Treadmills, Sole F80, Sole F80 Treadmill Folding
Mid ka mid ah u maleeyeen on "Ku kaydi $ 1000 on Sole Fitness F80 Treadmill"
syed kazmi wuxuu leeyahay,
Waxaan u baahanahay treadmill f80 keliya